psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ကျန်းမာသောအထီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုများအကြား Dopamine Cross- sensitization (2016) - သင့် ဦး နှောက် On Porn
ကိုးကား: Translational စိတ်ရောဂါကုသမှု (2016) 6, e740; Doi: 10.1038 / tp.2016.6
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်၊
L ကို Booij1,2,3,10K သည် Welfeld3,10M က Leyton3,4,5, တစ် ဦး ကဓားမြှောင်5ငါ Boileau6ငါ Sibon7, GB ကို Baker8, M Diksic5, JP Soucy5, JC Pruessner9, E Cawley-Fiset3KF Casey2 နှင့် C Benkelfat3,5
1စိတ်ပညာဌာန, Concordia တက္ကသိုလ်မှ Montreal, QC, ကနေဒါ
2Chu Saint Justine ဆေးရုံသုတေသနစင်တာ, Montreal, Montreal တက္ကသိုလ် QC, ကနေဒါ
3စိတ်ရောဂါကုသမှု, မြို့ McGill University မှ, Montreal, QC, ကနေဒါဦးစီးဌာန
4အပြုအမူ Neurobiology, Concordia တက္ကသိုလ်မှ Montreal, QC, ကနေဒါမှာရှိတဲ့လေ့လာရေးစင်တာတွင်
5McConnell ဦးနှောက် Imaging စင်တာ, Montreal အာရုံကြောဌာန Institute, မြို့ McGill University မှ, Montreal, QC, ကနေဒါ
6စွဲလမ်းမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, တိုရွန်တိုတက္ကသိုလ်, တိုရွန်တို, ON, ကနေဒါစင်တာ
7neuroscience Cliniques, Hôpital Pellegrin, Chu ဘော်ဒိုး, ဘော်ဒိုး, ပြင်သစ်က de ဝင်ရိုးစွန်း
8Neurobiology သုတေသနယူနစ်, စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန, အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအင်စတီကျု, အယ်လ်ဘာတာတက္ကသိုလ် Edmonton, AB, ကနေဒါ
9ဒေါက်ဂလပ်စိတ်ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်အင်စတီကျု, စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန, မြို့ McGill University မှ, Montreal, QC, ကနေဒါ
စာပေးစာယူ: ဒေါက်တာကို C Benkelfat, စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန, မြို့ McGill University မှ, 1033 ရိပ်သာလမ်း des တံသင်အနောက်, Montreal, QC, ကနေဒါ H3A1A1 ။ E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
15 ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ 2015 ကိုလက်ခံရရှိ; ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော 17 နိုဝင်ဘာ 2015; 23 နိုဝင်ဘာ 2015 လက်ခံခဲ့သည်
စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုစနစ်၏ Dysregulation ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်မျိုးစုံအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်ဖို့ relapse အတွက်အလားအလာ etiological အချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ ယခင်ကကျွန်တော်ထပ်ခါတလဲလဲပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဃ-စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်မူးယစ်သွေးဆောင် neurochemical အကဲဆတ်ခြင်းအထောက်အထားများကိုတဖြည်းဖြည်း သာ. ကြီးမြတ် dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ဃ-စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့ထပ်ခါတလဲလဲသောအယူအဆစိတ်ဖိစီးမှုမှ dopaminergic တုံ့ပြန်မှုတိုးပွါးစမ်းသပ်ရန်; ဆိုလိုသတည်းလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ထုတ်လုပ်သည်။ positron ထုတ်လွှတ် tomography အသုံးပြုခြင်း, ကျနော်တို့ (17 ± 22.1 နှစ်ပေါင်း = sd ±ဆိုလို) 3.4 ကျန်းမာအထီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်တိုင်းတာ [11ကို C] ရှေ့တော်၌အတည်ပြုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုအလုပ်တခုကိုမှ binding တုံ့ပြန်မှု raclopride နှင့်2ရက်သတ္တပတ်ထပ်ခါတလဲလဲဃ-စိတ်ကြွဆေးတစ် regimen ပြီးနောက် (3 × 0.3 ကီလိုဂရမ် MG-1, နှုတ်ဖြင့်; n= 8) သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ (3 ×နှုတ်ဖြင့်, lactose; n= 9) ။ ခံစားချက်နှင့်ဇီဝကမ္မတိုင်းတာတစ်ခုချင်းစီ session ကိုတစ်လျှောက်လုံးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဃ-စိတ်ကြွဆေး regimen မီစိတ်ဖိစီးမှုတာဝန်ထိတွေ့ရှိသမျှတို့, စိတ်ဖိစီးမှု (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, နှလုံးခုန်နှုန်း, cortisol ၏အမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝကမ္မညွှန်းကိန်းတိုးလာ P 0.05) ။ အဆိုပါဃ-စိတ်ကြွဆေး regimen ပြီးနောက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် cortisol တုံ့ပြန်မှု (လုပ်ခဲ့ပြီးခဲ့ကြသည်P<0.04) နှင့် voxel-based ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်ပိုကြီးတဲ့စိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင်ကျဆင်းမှုပြသခဲ့သည်11ကို C] raclopride အဆိုပါ striatum အနှံ့ Non-Displacement စည်းနှောင်အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စု, စိတ်ဖိစီးမှုမှပြန်လည်ထိတွေ့ [လျော့နည်းသွား၏သေးငယ်ပြွတ်ဦးဆောင်11ကို C] (အဓိကအားဖြင့် sensorimotor striatum အတွက် binding racloprideP<0.05) ။ အတူတူ, ဒီလေ့လာမှုမူးယစ်ဆေး×စိတ်ဖိစီးမှု Cross- sensitization များအတွက်သက်သေအထောက်အထားပေး; ထို့အပြင် striatal ဒေသများရှိ dopamine ထုတ်လွှတ်မှုတိုးမြှင့်နေစဉ်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုများသို့ကျပန်းထိတွေ့ခြင်းသည် dopamine neurotransmission ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြောင်းလဲစေသော psychopathologies အတွက်သတ်မှတ်ထားသောနိမ့်ကျသောအချက်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
စိတ်ဖိစီးမှုစွဲနဲ့ရူးအပါအဝင်နာတာရှည် relapsing အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် exacerbation အတွက်အချက်ပံ့ပိုးနေတဲ့သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းအလားအလာပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် '' ာင်း '' ရှိ၏ သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ဖိအားနှင့် / သို့မဟုတ် psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့အထပ်ထပ်ထိတွေ့အောက်ပါအချို့သက်ရောက်မှုတဖြည်းဖြည်း သာ. ကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။1, 2,3ဖြစ်ပေါ်နိုင်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဤတိုးမြှင့်တုံ့ပြန်မှုနာမကျန်းစတင်ခြင်းနှင့် relapse သြဇာလွှမ်းမိုးရန်အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ 4, 5, 6, 7
တိရစ္ဆာန်များအတွက်, psychostimulants မှ '' ာင်း '' စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive မှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။8,9ဥပမာ, ကြွက်များတွင် psychostimulants ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မော်တာလှုပ်ရှားမှု, မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် dopamine (DA) လွှတ်ပေးရန် precipitate ဖို့ဖိအားများ၏စွမ်းရည်ကိုတိုးပွားစေပါသည်။10, 11 ပြောင်းပြန်စမ်းသပ်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့ psychostimulants ဖို့အမူအကျင့်များနှင့် DA တုံ့ပြန်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။3, 12, 13, 14 စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် psychostimulants အကြား neurobiological အလွှာဖြန်ဖြေလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive အပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်သည်မဟုတ်ပေမယ့်က hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးနှင့် DA စီမံချက်များ, အ mesencephalon မှပေါ်ပေါက်အထူးသဖြင့်သူများအကြားအပြန်အလှန်ပါဝင်သောသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။15 လေ့လာမှုတစ်ခုအရေအတွက်ကစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် D-စိတ်ကြွဆေးနှစ်ဦးစလုံးတိုးမြှင့် cortisol ပမာဏအတွက်ရရှိလာတဲ့သည် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးကိုသက်ဝင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။16 Glucocorticoids, အလှည့်၌, tyrosine hydroxylase, monoamine oxidase-A နှင့် DA reuptake ထိခိုက်အပါအဝင်အများအပြားယန္တရားများ, မှတစ်ဆင့် DA လွှတ်ပေးရန်လွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်။16 ပဋိသန္ဓေ ယူ. , ဒီစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုအပေါ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သော DA တုံ့ပြန်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ အမှန်စင်စစ်ခွဲစိတ်သို့မဟုတ် pharmacological ပိတ်ဆို့ထားခြင်းမှတဆင့် endogenous glucocorticoids ၏အဓိကအရင်းအမြစ်များ၏ဖယ်ရှားရေး, (metyrapone), မူးယစ်သွေးဆောင် DA အကဲဆတ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မှေးမှိန်။17
ပြီးခဲ့သည့်လှုံ့ဆော်ထိုးအောက်ပါအနည်းဆုံး 1 ရက်သတ္တပတ်စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ယခင်ကအနက်တစ်ခုလေ့လာရေးဃ-စိတ်ကြွဆေးတစ် subchronic regimen ခံခဲ့သောကျန်းမာလူသားများတွင်လှုံ့ဆော် Re-ထိတွေ့မှုအပေါ် DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်မြဲတိုး (2 သီတင်းပတ်အတွင်းသုံးဆေးများ) သတင်းပေးပို့ခဲ့ကြ neurochemical အကဲဆတ်ခြင်းသက်သေအထောက်အထားအဖြစ်။18 ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကဒီကနဦးလေ့လာရေးပေါ်တက်အောက်ပါအတိုင်း18 တူညီသောဃ-စိတ်ကြွဆေး regimen ပြီးခဲ့သည့်လှုံ့ဆော်ထိုးအောက်ပါ2ရက်သတ္တပတ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားအပေါ် သာ. ကြီးမြတ် DA တုံ့ပြန်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမယ်လို့အဆိုပါယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့; အကြောင်း, လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ၏သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာအထီးတက္ကသိုလ်ကွန်ယက်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာသတင်းစာများအတွက် On-line ကိုကြော်ငြာမှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ (1) တစ်ဦး Semi-ဖွဲ့စည်းပုံမှာစိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး (DSM-IV များအတွက်စနစ်ကျသောကုသမှုဆိုင်ရာအင်တာဗျူး: လူနာ Edition ကို, SCID-NP), ကနဦးအရည်အချင်းပြည့်မီအကဲဖြတ်ရန်တယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးအပြီးတွင်တက်ရောက်လာသူများအပါအဝင်အပြည့်အဝ In-ဓာတ်ခွဲခန်းစိစစ်ခံယူ19 ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ကာ electrocardiogram နှင့်အရည်အချင်းကိုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုမေးခွန်းလွှာအပါအဝင် Self-လေးစားမှုနှင့်ရိုစိုးရိမ်စိတ်များ (2) အစီအမံအပါအဝင် (3) ပြည့်စုံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲ,20 အဆိုပါ Rosenberg က Self-လေးစားမှုစကေး21 နှင့်ပြည်နယ်-စရိုက်များတော့ပူပန် Inventory ။22 အဓိကဖယ်စံပါဝင်သည်: (1) အဓိကအာရုံကြော / ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနာမကျန်းသို့မဟုတ်ဦးနှောက် function ကိုထိခိုက်စေသို့မဟုတ် positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) ရလဒ်တွေကိုရှက်ကြောက်ဖွယ်ဆေးဝါးများအသုံးပြုခြင်း, (2) ဝင်ရိုးတန်းငါမမှန်တစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်မိသားစုသမိုင်း; (3) ပုံမှန်အတိတ်သို့မဟုတ်လက်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု (အကြောင်း, လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဒါမှမဟုတ်အတိတ် 12 လအတွင်း hallucinogens / sedatives ထိတွေ့ဖြစ်ပါတယ်); စိတ်ကြွဆေး, sedatives သို့မဟုတ်စုစုပေါင်းလေးယောက်ထိတွေ့မှုကျော်လွန် hallucinogens ၏ (4) တစ်သက်တာအသုံးပြုခြင်း, ဆေးရွက်ကြီး၏ (5) မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကို ( တစ်နေ့လျှင်5စီးကရက်); ဆေးခြောက်၏ (6) မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကို (တစ်ပတ်ကိုနှစ်ဦးကိုအသုံးပြုမှုထက် greter); (7) လေ့လာမှု (Triage-TM) ၏ရက်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများအတွက်ဆီးဝိသဗေဒ screen ပေါ်မှာအပြုသဘောစမ်းသပ်; နှင့် (8) ကြည့်ရှု (အခြား PET / သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) ဖယ်စံတွေ့ဆုံ နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက်) ။ အဆိုပါလေ့လာမှု Montreal အာရုံကြော Institute မှသုတေသနကျင့်ဝတ်ဘုတ်အဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုစာဖြင့်ရေးသားအသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့သည်။
အရည်အချင်းပြည့်မီပါဝင်သူ (0.3 ကီလိုဂရမ် MG ဃ-စိတ်ကြွဆေးဖြစ်စေလက်ခံရရှိ-1ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးလေ့လာမှု၌ရှိသကဲ့သို့အလားတူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အကဲဖြတ်အောက်ပါသုံးခုကသီးခြားရက်တိုင်း 48 ဇ, အပေ gantry အပေါ်တူညီသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် () ခုနှစ်, အပေါ်ပါးစပ်) သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။18 အားလုံးသင်တန်းသားများကို [သုံးခု 60 မိနစ် PET ခံယူ11သူတို့ကမွန်ထရီရယ် Imaging ကစိတ်ဖိစီးမှု Task ကို (အခိုးအငွေ့နှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြရသောကာလအတွင်းက C] raclopride စကင် (~7MCI) အစည်းအဝေးများ, ပုံ 1) ။ တဦးတည်းပေ [11ကို C] raclopride စကင် [နှစ်ခုကတခြားပေသော်လည်း, ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းတာဝန် (အခိုးအငွေ့ထိန်းချုပ်မှု) နဲ့ကောက်ယူခဲ့သည်11ကို C] raclopride Scan ဖတ် (အခိုးအငွေ့ 1) မတိုင်မီစိတ်ဖိစီးမှုမှ DA တုံ့ပြန်မှုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်နောက်ဆုံးမူးယစ် (ဃ-စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ) (အခိုးအငွေ့ 14) ထိုး2ရက်အကြာမှာဖို့အခိုးအငွေ့စိတ်ဖိစီးမှုတာဝန်နှင့်အတူရယူခဲ့ကြသည်။ အားလုံးပါဝင်သူများထဲမှတစ်ဦးခန္ဓာဗေဒက high-resolution ကို T1 မာန်တင်း MRI ပေမှတ်ပုံတင်ရေး၏ရည်ရွယ်ချက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခံယူ။ ယင်းအခိုးအငွေ့မှလေ့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလျော့နည်းစေရန်, သင်တန်းသားများကိုပထမဦးဆုံးပေ session တစ်ခုမတိုင်မီတစ်ချိန်ကအခိုးအငွေ့တာဝန် (Pre အခိုးအငွေ့) ဖျော်ဖြေခြင်း, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုလေ့ကဲ့သို့တူညီသောစိတ်ဖိစီးမှုတာဝန်ဖို့ပထမနှင့်ဒုတိယထိတွေ့မှုများအကြားအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လေ့ရှိတယ်။23, 24 သင်တန်းသားများကိုအစာရှောင်ဖို့တောင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ session တစ်ခုမတိုင်မီ4ဇ၏နိမ့်ဆုံးအဘို့ဖိန်းဓာတ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးမှရှောင်ကြဉ်ခံခဲ့ရသည်။ ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအားလုံးခုနစ်ခုအစည်းအဝေးများ, ~ 21 ရက်ပေါင်းတစ်ဦးကျြောကာလအတှငျးအရပျကို ယူ. , ပုံ 1 (ကြည့်ရှု နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက်) ။ သူတို့ဟာတစ်ခုလုံးကိုလေ့လာမှုကာလတစ်လျှောက်လုံးမည်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမသုံးစွဲဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီ session တစ်ခု၏အစမှာအနုတ်လက္ခဏာဆီးမူးယစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါလေ့လာမှု၏စမ်းသပ်ပုံစံဒီဇိုင်း။ ပထမဦးဆုံးအပေမတိုင်မီ PreMIST = အလေ့အကျင့် session တစ်ခု [11ကို C] raclopride စကင်။ အခိုးအငွေ့ထိန်းချုပ်မှု = ပေ [11ကို C] raclopride နိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက် scan ။ အခိုးအငွေ့ 1 = ပေ [11ကို C] raclopride သည့် D-စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ regimen ရှေ့တော်၌ထိုဖိစီးမှုအခိုးအငွေ့တာဝန်နှင့်အတူ scan ။ အခိုးအငွေ့2= ပေ [11ပြီးခဲ့သည့်မူးယစ်ဆေးဝါး (ဃ-စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ) ထိုးပြီးနောက်ကို C] raclopride ဟာစိတ်ဖိစီးမှုခိုးအငွေ့တာဝန် 14 ရက်ပေါင်းနှင့်အတူ scan ။ PET, positron ထုတ်လွှတ် tomography ။
အဆိုပါခိုးအငွေ့ဟာ Trier စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတာဝန်အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးအတည်ပြုစိတ်ဖိစီးမှုတာဝန်ဖြစ်ပါသည်25 တစ်ခုနှင့်ပုံရိပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုမှုအတွက်အဆင်ပြေအောင်။26 ကျွန်တော်တို့သည်အလေး 12-မိ segments များနှင့်အတူအသီးအသီးသုံး 3-မိလုပ်ကွက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တာဝန်စဉ်အတွင်းဂဏန်းသင်္ချာတာဝန်များကိုကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်မှတဆင့်ကင်နာအတွက်တင်ပြနေကြပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုကွန်ပျူတာမောက်စ်ကို သုံး. ဖြေသည်။ အနည်းငယ်တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးချင်းစီရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုထက်ကျော်လွန်ဖြစ်သကဲ့သို့အသီးအသီးတွက်ချက်မှုအဘို့ Task ကိုအခက်အခဲနှင့်အချိန်သတ်ခြင်း, ပါဝင်သူရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ် မူတည်. အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်ကွန်ပျူတာ algorithm ကိုအားဖြင့်အလိုအလျှောက်ချိန်ညှိနေကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးနောက်ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပါဝင်သူရဲ့စွမ်းဆောင်ရည် (မှန်ကန်သော, မမှန်ကန်ကြောင်း, အချိန်ကုန်) အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ချက်ပြသ; တစ်ဦးချင်းစီ segment ကိုအောက်ပါတစ်အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်နှစ်ခုဖြည့်စွတ်နည်းလမ်းသည်: အ program ကတစ်ဦးပွညျကိုအမှီဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုမျှော်လင့်ချက်များအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောခဲ့ကြောင်းယုံကြည်ဖို့ဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။
ဤသည်တာဝန်စိတ်ဖိစီးမှုမှအမူအကျင့်များနှင့်ဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှုထုတ်ယူနိုင်ရန်ပြသထားသည်နှင့်၎င်း၏ပိုပြီး ventral တစျပိုငျးကိုအပါအဝင်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် striatal DA လွှတ်ပေးရန်, နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။26, 27 အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ sensorimotor ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေ (အခိုးအငွေ့ထိန်းချုပ်မှု) စဉ်အတွင်းသင်တန်းသားများကိုအချိန်ကန့်သတ်, မြင်နိုင်သောတိုးတက်မှုလက္ခဏာ, အသံသို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်မပါဘဲ, 36 မိဘို့ရိုးရှင်းသောဂဏန်းသင်္ချာဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုနောက်ဆုံးအပေစိတ်ဖိစီးမှု session ရဲ့အဆုံးမှာ debriefed ဖြစ်. , task ကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုပြင်ပတွင်ဖြစ်စိတ်ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်နှင့်၎င်းတို့၏ဂဏန်းသင်္ချာကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုင်းတာဖို့ရည်ရွယ်မခံခဲ့ရကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်။
ပုဂ္ဂလဒိဋ္အပြုအမူအပြောင်းအလဲများ Mood ပွညျထောငျစု၏ကိုယ်ရေးဖိုင်နှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်28 နှင့်ပြည်နယ်-စရိုက်များတော့ပူပန် Inventory,22 မီနှင့်ချက်ချင်းအသီးအသီးအခိုးအငွေ့ထိတွေ့မှု၏အဆုံးပြီးနောက်; အဖြစ်အခါစကင်နာပြင်မှာစမ်းသပ် session ရဲ့အဆုံးမှာ (Data ပြမပါ) ။ cortisol နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းတိုင်းတာမှုများအဘို့အသွေးနမူနာ (MP100-Biopac စနစ်များ) အခြေခံမှာစုဆောင်းခဲ့ကြသည် 12 မိတစ်ခုချင်းစီ session ကိုတလျှောက်လုံး (ပုံ 1).
Voxel ပညာရှိ parametric မြေပုံနှင့် t-statistics
အဆိုပါ PET ပုံရိပ်တွေအကြား-frame ကိုရွေ့လျားမှု artefacts အဘို့အတညျ့ခဲ့ကြသည်29 စီတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ MRI မှ Co-မှတ်ပုံတင်။ အဆိုပါ MRI နှင့်ပေပုံရိပ်တွေ linearly သည့်မွန်ထရီရယ်အာရုံကြောဌာန Institute-305 template ကို အသုံးပြု. stereotactic အာကာသသို့အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။30 [11ကို C] Raclopride Non-Displacement စည်းနှောင်အလားအလာ (BPND=fNDBအောငျ/KD) တစ်ဦးကိုကိုးကားဒေသသည်အတိုင်း, vermis ဖယ်ထုတ်ပြီး, အ cerebellar cortex နှင့်အတူတစ်ရိုးရှင်းသောရည်ညွှန်းတစ်ရှူးနည်းလမ်းကိုသုံးပြီး, တစ်ခုချင်းစီ voxel မှာခန့်မှန်းခဲ့သည်။31, 32 Voxel ပညာ tကို BP နှိုင်းယှဉ် -mapsND အခိုးအငွေ့ 1 မှအခိုးအငွေ့2ဆွေမျိုးကာလအတွင်းကျန်နေတဲ့အတူတွဲထားသောအသုံးပြုပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့သည် tတစ်ခုံနှင့်အတူ -tests t= 3.76 ညီမျှဖို့ P= ကျပန်းလယ်ပြင်သီအိုရီအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ခုလုံး striatum ရှာဖွေရေး volume အတှကျ 0.05 ။33 ဒီချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုရည်မှန်းချက်ကို BP ပြောင်းလဲမှုများ detect ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ND အဘယ်သူမျှမနှင့်အတူ voxel အဆင့်မှာ တစ်ဦး ခန္ဓာဗေဒအယူအဆဤအရပ်မှအကျိုးစီးပွားအသံအတိုးအကျယ် (või) နေရာချထား၏ကန့်သတ်မှုအချို့ကျော်လွှား။27 ယင်းကိုကြည့်ပါ ကျေးဇူးပြု. နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် အဆိုပါ striatal ရှာဖွေရေးအသံအတိုးအကျယ်နှင့် voxel ပညာရှိစာရင်းအင်းတံခါးခုံကိုသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်ဘယ်လိုအပေါ်တစ်ဦးထက်ပိုသောအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်သည်။
သုံး VOIs limbic ventral striatum, အသင်းအဖွဲ့များ striatum (Pre-commissural dorsal putamen, Pre-commissural dorsal caudate နှင့် Post-commissural caudate) နှင့် sensorimotor striatum (Post-commissural putamen) အပါအဝင်, တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းရဲ့ MRI အပေါ်မြန်မာနိုင်ငံသကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ စုစုပေါင်းခန္ဓာဗေဒဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံသို့või delineation ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းရဲ့ခန္ဓာဗေဒ MRI မှအလိုအလျှောက် segment လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ရရှိသောခဲ့သည်။34 võiတစ်ခုချင်းစီပါဝင်သူရဲ့အစုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သန့်စင်ပြီးခဲ့သည်။18 ပေပြောင်းလဲနေသောဒေတာပေါ်või template ကို align နှင့်ဒေသတွင်းအချိန်လှုပ်ရှားမှုခါးဆစ် extract စေရန်, တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းရဲ့ပြောင်းလဲနေသောရေဒီယိုသတ္တုကြွပေဒေတာအချိန်ကိုအတိုင်းအတာတလျှောက်တွင်ပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်နှင့် MRI မှ Co-မှတ်ပုံတင်။35 ပျမ်းမျှအားကို BP ၏ခန့်မှန်းချက်ND ဤအ VOIs အတွင်းသုံးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အခြေအနေများအတွက်ထုတ်ယူခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်ဆဲအခြေအနေ (အခိုးအငွေ့ထိန်းချုပ်မှု, အခိုးအငွေ့ 1, အခိုးအငွေ့ 2) နဲ့ကှဲလှဲတဲ့ထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအချက်နှင့်တဦးတည်းအကြား-ဘာသာရပ်များအချက်အဖွဲ့ခွဲ (ရလဒ်များအရအိပ်ယာ, D-စိတ်ကြွဆေး) ကို BP အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်စီvõiဘို့ကောက်ယူခဲ့သည်အတွင်း-ဘာသာရပ်များအဖြစ်ND။ အဆိုပါ Mauchly စမ်းသပ်မှုကဆုံးဖြတ်အဖြစ်လွတ်လပ်မှုဒီဂရီ (ကိုလညျးရှု, nonsphericity ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဖန်လုံအိမ်-Geisser စမ်းသပ်သုံးပြီးတညျ့ခဲ့ကြသည် နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက်).
ရလဒ်ကိုအစီအမံကှဲလှဲ၏ထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အဖွဲ့ခွဲ (ဃ-စိတ်ကြွဆေး vs ရလဒ်များအရအိပ်ယာ) ကိုအကြား-ဘာသာရပ်များအချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအမူအကျင့်ဒေတာအတွက်အတွင်းမှာပဲ-ဘာသာရပ်များအချက်များစမ်းသပ်အခြေအနေ (အခိုးအငွေ့ထိန်းချုပ်မှု, အခိုးအငွေ့ 1, အခိုးအငွေ့ 2) နှင့်အချိန် (အခြေခံ, Post-တာဝန်) တို့ဖြစ်သည်။ HR နဲ့ Cortisol အဘို့, ref ၌ရှိသကဲ့သို့တွက်ချက်သည့်ခါးဆစ်အောက်မှာဧရိယာ (။ 36) တစ်ဦးချင်းစီစမ်းသပ်ခွအေနအေများအတွက်အတွင်း-ဘာသာရပ်များအချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
တဆယ်ရှစ်ကျန်းမာယောက်ျားလေ့လာမှုမှာ (ဃ-စိတ်ကြွဆေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ n= 9; ရလဒ်များအရအိပ်ယာ n= 9) ။ တဦးတည်းပါဝင်သူ (ဃ-စိတ်ကြွဆေးအခွအေနေ) ကို BP အတွက်ယုတ်အကြွင်းမဲ့အာဏာအပြောင်းအလဲများပြသND သုံးစံသွေဖီနမူနာယုတ် (ငါးကြိမ်အခိုးအငွေ့ကို အသုံးပြု. ယခင်လေ့လာမှုမှာ '' စိတ်ဖိစီးမှု '' တုံ့ပြန်အစီရင်ခံအပြောင်းအလဲများကိုထက်ပိုမိုမြင့်မား) အထက်အခိုးအငွေ့ 1 (အခိုးအငွေ့ထိန်းချုပ်မှု vs အခိုးအငွေ့ 1) မှထိတွေ့မှုကာလအတွင်း (ဒေသများတွင်တစ်လွှား) ။27 ဤရွေ့ကားပုံမှန်မဟုတ်သောကို BPND ဒီပါဝင်သူအတွက်တန်ဖိုးများနီးပါးဆက်ဆက်တစ်နည်းပညာဆိုင်ရာအမှားကြောင့်ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ပါဝင်သူထို့ကြောင့်ဆန်းစစ်နေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ D-စိတ်ကြွဆေးလူမျိုးကွဲ vs ယင်းရလဒ်များအရအိပ်ယာထဲတွင်ပါဝင်သူ (စားပွဲတင် 1) သိသိသာသာ [ဒေသစစ်တမ်းများသို့မဟုတ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတိုင်းတာရန်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူကွဲပြား, ဒါမှမဟုတ်၏ထိုးထိုးမပြုခဲ့11သုံးယောက်ပေအစည်းအဝေးများမဆိုအတွက်ကို C] raclopride (ကြည့်ရှု စားပွဲတင် 1) ။ ထိုးသွင်းငွေပမာဏ2အလေးပေးဖို့စိတ်ဖိစီးမှု 1 ဆွေမျိုးပြီးနောက်အောက်ပိုင်းသည်ထင်ရှားပေမယ့်, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုမူးယစ် (ဃ-စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအမျိုးအစား၏လွတ်လပ်သောရှိ၏ P= 0.94) ။
ဇယား ၁ - နမူနာ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ (ဆိုလိုသည် (sd)) ။
စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမတိုင်မီထပ်ခါတလဲလဲ d-စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ (အခိုးအငွေ့ထိန်းချုပ်မှု vs အခိုးအငွေ့ 1)။ စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့သည့် D-စိတ်ကြွဆေး regimen (အခိုးအငွေ့ထိန်းချုပ်မှု vs အခိုးအငွေ့ 1) striatal ကို BP အတွက် variable ကိုဒါပေမဲ့သိသိသာသာလျှောက်လျော့နည်းရူးနှမ်းမတိုင်မီND အဓိကအားဖြင့်အဆိုပါ putamen အတွက်တန်ဖိုးများ။ ပြောင်းလဲမှု၏ပြင်းအား (% လျော့ကျခြင်းနှင့်စပျစ်သီးပြွတ်အရွယ်အစား) (နှစ်ဦးစလုံးလူမျိုးကွဲများအတွက်အတော်လေးဆင်တူခဲ့သည်စားပွဲတင် 2).
ဇယား2- ပါဝင်သည်ကို BP ၏ပုံဥပမာND တစ်ဦးချင်းစီ၏အကြီးဆုံးစပျစ်သီးပြွတ်ကနေဒေတာတွေကို (SD ±) t-map ။
အထပ်ထပ်ဃ-စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအောက်ပါစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (အခိုးအငွေ့2vs အခိုးအငွေ့ 1)
စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့ပေမယ့်အဆိုပါဃ-စိတ်ကြွဆေးာင်း regimen [သိသိသာသာလျော့နည်းသွားသာသေးငယ်ပြွတ်ရူးနှမ်းမတိုင်မီ11ကို C] raclopride ကို BPND ကို BP အတွက်တန်ဖိုးများ (အထကျကိုကြည့်ပါ), စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်လျှောက်လျော့နည်းND ယင်း Sensitive regimen အောက်ပါအများကြီးပိုကျယ်ပြန့် (ခဲ့ကြသည်ပုံ 2; စားပွဲတင်2နှင့် စားပွဲတင် 3) ။ လျော့နည်းသွားကို BP ၏ဤအပိုကြီးပြွတ်ND အောက်ပါစိတ်ဖိစီးမှုမှပြန်လည်ထိတွေ့သည့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ regimen ပြီးနောက်ရှုလေ့လာမခံခဲ့ရပါ။
Voxel ပညာ t[၏ -maps11ကို C] raclopride ကို BPND အဆိုပါထပ်ခါတလဲလဲဃ-စိတ်ကြွဆေး regimen ကိုလက်ခံရရှိသူကိုအခိုးအငွေ့ကာလအတွင်းအပြောင်းအလဲများ (left, n= 8) နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ regimen (ညာ, n= ထိန်းချုပ်မှုခွအေနအေမှဆွေမျိုး 9) ။ [အတွက်အခိုးအငွေ့ 1-အခိုးအငွေ့2= ပြောင်းလဲမှု11ကို C] raclopride ကို BPND ပထမဦးဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့ခြင်းမှစိတ်ဖိစီးမှုဆွေမျိုးမှဒုတိယထိတွေ့မှုကာလအတွင်း။ တစ်ဦးက သာ. ကြီး t-value [အတွက် သာ. ကြီးလျှောက်လျော့နည်းထင်ဟပ်11ကို C] raclopride ကို BPND (အကြောင်း, သာ. ကြီးမြတ် dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်) ။ ကို BPNDnon-Displacement စည်းနှောင်အလားအလာ; အခိုးအငွေ့, Montreal Imaging က Task ကိုစိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျ။
ဇယား ၃ - ထိုအုပ်စုများအတွင်းရှိအထွတ်အထိပ် voxel (Montreal Neurological Institute space coordinates) ၏သတ်မှတ်ထားသောစပျစ်သီးပြွတ်များနှင့်သြဒီနိတ်များနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ။
võiသည့် D-စိတ်ကြွဆေး regimen မှကြိုတင်ထိတွေ့ [အတွက်အလွန် variable ကို, ဒါပေမယ့် nonsignificant အပြောင်းအလဲများမှဦးဆောင်ကြောင်းပြသလေ့လာဆန်းစစ်11ကို C] raclopride ကို BPNDမရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုတွင်အခိုးအငွေ့2နှင့်အခိုးအငွေ့ 1 အကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု (ရှိခဲ့နောက်ဆက်တွဲပုံ S1) ။ သို့သျောလညျးအခိုးအငွေ့ထိန်းချုပ်မှုခွအေနအေ vs သည့်အခိုးအငွေ့2အတွက်အလယ်တန်းvõiကို BP အတွက်သောရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စု, သိသာလျှောက်လျော့နည်းပြသလေ့လာဆန်းစစ်ND လက်ျာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ striatum (F (2,16) = 4.44 အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် P= 0.03), လက်ဝဲ ventral striatum (F (2,16) = 4.11, P= 0.04) နှင့်ညာဘက် (F (2,16) 3.76 =, P= 0.05) နှင့် left (F (2,16) = 4.94, P= 0.02) sensorimotor striatum ။
အခိုးအငွေ့ထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုး, အခိုးအငွေ့ 1 စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုအချိန်× Mood ပွညျထောငျစု၏ကိုယ်ရေးဖိုင် (စမ်းသပ်ဆဲအခွအေနေဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်တစ်ခုတိုးချဲ့ '' စိုးရိမ်စိတ် '' တုန့်ပြန်မှု: F (2,30) = 4.31, P= 0.02; ထိန်းချုပ်မှု vs အခိုးအငွေ့ 1: (1,15) = 8.81; P= 0.01) နှင့်ပြည်နယ်-စရိုက်များတော့ပူပန် Inventory (စမ်းသပ်ဆဲအခွအေနေအချိန်×: F (2,30) = 4.12, P= 0.02; F ကို (1,15) = 8.41; P= 0.01) ။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှု 21 ရက်ပေါင်းမှာအခိုးအငွေ့ Re-ထိတွေ့မှုအပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိမဟုတ်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, မဟုတ်, ဤဆိုးကျိုးများလူမျိုးကွဲ (ဃ-စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ) အကြားကွဲပြားခြားနားခဲ့ပေ။ [ပြောင်းလဲမှုများအကြားမျှအရေးပါသောဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်11ကို C] raclopride ကို BPND နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု။ ကိုလည်းကြည့်ပါ နောက်ဆက်တွဲဇယား S1.
21 ရက်ပေါင်းမှာပထမဦးဆုံးအခိုးအငွေ့ပေနေစဉ်အတွင်းအဆိုပါအခိုးအငွေ့သိသိသာသာတိုးမြှင့်နှလုံးခုန်နှုန်း scan နဲ့ re-ထိတွေ့မှု (စမ်းသပ်ဆဲအခြေအနေအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု: F (2,30) = 18.58, P<0.001; ထိန်းချုပ်မှု vs MIST 1: F (1,15) = 19.66, P<0.001; ထိန်းချုပ်မှု vs MIST 2: F ကို (1,15) = 19.81; P<0.001), ဒါပေမယ့် subgroup (amphetamine, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ) သို့မဟုတ် MIST 1 vs MIST 2. vs Cortisol အကြားခြားနားချက်များနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမ interaction က MIST 1 ထိတွေ့မှု (F (1,15) = 2.93) ကာလအတွင်းတိုးမြှင့်ရှိ၏ Pအခိုးအငွေ့ Re-ထိတွေ့မှာပိုပြီးစေ့စ့စပ်စပ် = 0.107) နှင့် (နေ့က 21 မှာ, F (1,15) = 18.88; P= 0.001) ။ အဖွဲ့ခွဲအပြန်အလှန်×အခြေအနေကိုအရေးပါမှုကို (F (2,30) = 3.15, ဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့လမ်းကြောင်းပြသ Pအဆိုပါဃ-စိတ်ကြွဆေး regimen (F (0.057) = 1,15 အောက်ပါအခိုးအငွေ့ သာ. ကွီးမွတျမှ re-ထိတွေ့စဉ်အတွင်း cortisol တုံ့ပြန်မှုနဲ့အတူ = 5.20), P= 0.038), ရလဒ်များအရအိပ်ယာမှဆွေမျိုး။ အပြောင်းအလဲများကြားကမျှအရေးပါသောဆက်စပ်မှု [ရှိခဲ့သည်11ကို C] raclopride ကို BPND နှင့် psychophysiological သို့မဟုတ် cortisol စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု။ ကြည့်ပါ ကျေးဇူးပြု. နောက်ဆက်တွဲဇယား S2.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှုနှင့်အတူတသမတ်တည်း,18 ပလာစမာစိတ်ကြွဆေးပြင်းအားကိုတွေ့မြင် (ညီတူညီမျှအပေါငျးတို့သညျသုံးအစည်းအဝေးများအတွက်လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ရှေ့မှောက်တွင်အတည်ပြုခဲ့သည် နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် အသေးစိတ်ကို) ။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုယခင်ကလူ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်ာင်းသွေးဆောင်သရုပ်ပြဃ-စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့တဲ့ regimen စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုပိုမိုတုံ့ပြန်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမယ်လို့ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုကအကြောင်းပဏာမသက်သေအထောက်အထားသည်။ ယင်းအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီခြင်း, စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် DA နှင့် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှုတစ်ဦးကထပ်ခါတလဲလဲဃ-စိတ်ကြွဆေး regimen ပြီးနောက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ် 14 လက်ထက်၌။ ဤရွေ့ကားကြီးထွားတုံ့ပြန်မှုဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ၏အစီရင်ခံစာများနှင့်အညီဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။8, 11, 37
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်ကောင်းစွာထိုကဲ့သို့သောလျှပ်စစ်ရှော့ခ်, အမြီးအဖြစ်တော့နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များ, ထိတွေ့အောက်ပါစမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။38, 39, 40 လူသားမြားသညျတှငျ, အနည်းငယ်လေ့လာမှုများစိတ်ဖိစီးမှုမှ dopaminergic တုံ့ပြန်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးပါပြီ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုဖို့ DA တုံ့ပြန်မှုမြင့်မားတဲ့ variable ကိုပေါ်လာမကြာခဏ (ဥပမာ, အနိမ့် Self-လေးစားမှု, အနိမ့်မိခင်စောင့်ရှောက်မှု၏တစ်ဦးသမိုင်းသို့မဟုတ်စိတ္တများအတွက်အန္တရာယ်မှာသူတို့နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ) ဖြစ်ပေါ်နိုင်တစ်ဦးချင်းစီကန့်သတ်ထားပါသည်26, 27, 41 ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုပိုငျးတှငျဤ variable ကိုတုံ့ပြန်မှုကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်ပေါက်, စိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံများ၏တစ်သက်တာသမိုင်းနဲ့ differential ။
ဒီမှာအဓိကယူဆချက်နှင့်ကိုက်ညီပါကထပ်ခါတလဲလဲဃ-စိတ်ကြွဆေးအောက်ပါ, စိတ်ဖိစီးမှုမှပြန်လည်ထိတွေ့နောက်ထပ်ကို BP လျော့နည်းသွားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်ND ကျန်းမာသင်တန်းသားများအတွက်တန်ဖိုးများ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် [ပြောင်းလဲများ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်များဆင်တူများမှာ11ကို C] - (+) - PHNO (က: D2/D3 ဒီဓာတ်ခွဲခန်းစိတ်ဖိစီးမှုပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးစိတ္တနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် agonist ligand) စည်းနှောင်တုံ့ပြန်မှု။42 ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက် (ဥပမာ, မျိုးဗီဇ) ကျော်နှင့်အခြားအားနည်းချက်အချက်များအထက်, မူးယစ်ဆေးဝါးမှထိတွေ့မှုအကြိမ်ကြိမ်သောအမြင်အားကောင်းလာစေရန်, ဖြစ်နိုင်သည်, DA-related မမှန်များ၏အန္တရာယ် striatal ဒေသများရှိစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲပစ်ရန်သူတို့ရဲ့သီးခြားအကျိုးသက်ရောက်မှုများ summate နှင့်ပေလိမ့်မည်။
ကို BP အတွက်အပြောင်းအလဲများND ထို့အပြင်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ regimen အောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဃ-စိတ်ကြွဆေးအဖွဲ့ခွဲအတွက်အစီရင်ခံအပြောင်းအလဲများကိုလက်ဝဲ ventral striatum အတွက်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဟာ posterior putamen ဖြစ်ပွားနေသောဒေသတွင်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိကြ၏။ တစ်ဦးတည်းထပ်ခါတစ်လဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက် meso-corticolimbic DA လွှတ်ပေးရန်ပြောင်းလဲပစ်ရန်သရုပ်ပြခဲ့သည်။43 လူသားမြားသညျတှငျ, ယခင်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှု, အထူးသဖြင့်အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှု, နောက်ပိုင်းတွင်အသက်တာ၌စိတ်ရောဂါမမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တဦးတည်းအရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။44, 45 ကတိုက်ရိုက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ကြားဆက်ဆံရေးထူထောင်နိုင်ဖို့လက်ရှိမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့သူကအစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုနောက်ဆက်တွဲစိတ်ဖိစီးမှုမှတိုးချဲ့ ventral striatum DA လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့ပြီး26 အဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌ထိတွေ့ psychostimulant ရန်။46 လျော့နည်းသွားကို BP ၏ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ND (ထိုရလဒ်များအရအိပ်ယာအဖွဲ့ခွဲများတွင်), ထပ်ခါတလဲလဲကြောင့်ယခင်စာပေ, တစ်ဦးတည်းထိန်းအကွပ်မဲ့စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့ထောက်ခံပါတယ်ာင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။3 re-ထိတွေ့ဃ-စိတ်ကြွဆေးအောက်ပါစိတ်ဖိစီးမှုမှ (ရလဒ်များအရအိပ်ယာမှဆွေမျိုး) ကွဲပြားခြားနားသော striatal ငျဒသေမှာရှိတဲ့ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများထုတ်လုပ်ရန်လိမ့်မည်။18
ရလဒ်ယခင်ကထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ကြွဆေးနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်တိုးမြှင့်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် DA တုံ့ပြန်မှုဖေါ်ပြခြင်းလေ့လာမှုများနှင့်အတူလိုင်း၌ရှိကြ၏ပေမယ့်,3 methylphenidate သို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးနဲ့စူးရှသောစိန်ခေါ်မှုအောက်ပါ (ထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုး) ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်နှင့်အတူလူနာအတွက် attenuation DA တုံ့ပြန်မှု၏သက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူရလဒ်တွေကိုဆနျ့ကငျြဘ47, 48, 49 သို့မဟုတ်တစ်ဓာတ်ခွဲခန်းဖိအားထိတွေ့မှု။41 ဒီကွာဟမှုများအတွက်အကြောင်းပြချက်မသိရသေးရှိနေဆဲ, ဒါပေမယ့် Pre-ရှိပြီးသားစရိုက်များ, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောစိန်ခေါ်မှုတွေမှကြီးထွားအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုဖြန်ဖြေကတခြား neurobiological အလွှာမှ DA နေပြောင်းကုန်ပြီ၏ကျယ်ပြန့်သမိုင်းနဲ့အတူရှိသူများအတွက်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဆုတ်ခွာသက်ရောက်မှုကိုထင်ဟပ်နိုင်ဘူး။50, 51, 52 အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်များထပ်မံမူးယစ်ဆေးမှီခို / အလွဲသုံးစားမှုစတင်ခြင်းနှင့် relapse အတွက် DA (လက်ဝါးကပ်တိုင်) အကဲဆတ်ခြင်းဆက်စပ်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကြိုတင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုအမျိုးမျိုးအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူလက်တွေ့နမူနာများတွင်စနစ်တကျ DA (လက်ဝါးကပ်တိုင်) ာင်းယန္တရားများကိုလေ့လာရန်လိုအပ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ။
ဒီလေ့လာမှုကအားလုံးအရှင်အလားအလာရှက်ကြောက်အသေးအဖွဲ, စမ်းသပ်ခြင်း၏ 30 ရက်ကြာကာလတစ်လျှောက်လုံးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံများအဘို့အဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်သူယောက်ျားတစ်ဦးဂရုတစိုက်ပြ, တသားတည်းနမူနာကိုရွေးချယ်ခြင်းကနေအကျိုးအမြတ်။ ဒါဟာရလဒ်များကိုအမျိုးသမီးလူနာသို့မဟုတ်နာတာရှည်အထပ်ထပ်စိတ်ဖိစီးမှုဖို့ထိတွေ့အောက်ပါတို့အပါအဝင်အခြားအနမူနာမှယေဘူယျနိုင်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, သို့သော်, အကျိုးစီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်။ longitudinal နောက်ဆက်တွဲကဒီမှာကိုကူညီလိမ့်မယ်။
ဒီနမူနာအရွယ်အစား (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပါအဝင်) ယခင်ာင်းလေ့လာမှုများအတွက်လေ့လာတရာမှအဘယ်သူမျှမကွဲပြားခဲ့သော်လည်း, ကကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, psychophysiology နှင့် DA တုံ့ပြန်မှုအကြားပိုမိုမြင့်မားယူမှုကို interaction က၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောစုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်မပြုခဲ့ပေ။ တစ်ဦးကပိုကြီးနမူနာကိုလည်း (ဥပမာအဘို့, COMT Val (158) ၏ Met allele ထိုကဲ့သို့သော Hernaus ၌ရှိသကဲ့သို့, polymorphic တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတိကျတဲ့ alleles / genotype ၏အလားအလာစီမံခန့်ခွဲမှုအခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာခွင့်ပြုလိမ့်မည် et al ။53) ။ အလားတူပဲကျနော်တို့ရဲ့နမူနာကို BP အကြားသိသိသာသာဆက်စပ် detect လုပ်ဖို့လုံလောက်စာရင်းအင်းပါဝါပေးမည်မဟုတ်ပါND နှင့်အမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝကမ္မအစီအမံ။ အဆိုပါဃ-စိတ်ကြွဆေး regimen အလွန်အမင်း variable ကိုခဲ့ပါတယ်ပြီးနောက်ထို့အပြင်või Re-ထိတွေ့စိတ်ဖိစီးမှုမှသော DA တုံ့ပြန်မှုညွှန်ပြလေ့လာဆန်းစစ်။ ဒီအမြင့်မားတဲ့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအဆိုပါလေ့လာတွေ့ရှိသက်ရောက်မှုကို အသုံးပြု. ဆိုတဲ့အချက်ကိုများအတွက်အကောင့်မှတွေးဆနေပါတယ် t-maps võiအားဖြင့်လေ့လာဆန်းစစ်အတည်မပြုနိုင်ပါ။ ထဲမှာတနည်း, အ activation loci t-maps အဆိုပါvõiနယ်နိမိတ်ထဲကနေကွဲပြားနှင့်အရှင်võiလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့်ထင်ရှားခဲ့ကြမည်မဟုတ်ပါ။ အမှန်စင်စစ်လူသားအတွက် cortical functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး striatal ငျဒသေဟာပွင့်ဆိုင်ပုံစံအားဖြင့်အကြံပြုထက်အရေအတွက်ပိုမိုကြီးမားဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။54
ကနဦးစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှု HR နှင့်အပျက်သဘောခံစားချက်ပြည်နယ်များအပေါ်မျှော်လင့်ထားသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများထွက်ပေါ်သော်လည်း,55 Re-ထိတွေ့ subchronic ဃ-စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးအနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်ထုတ်ယူမပြုခဲ့ပြီးနောက်စိတ်ဖိစီးမှုရန်။ Re-ထိတွေ့စိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်လျှော့ချစိတ်ဓါတ်များ၏မရှိခြင်းကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီအတွက် psychostimulants မှအမူအကျင့်ာင်းအဓိကအားစိတ်ဓါတ်များ-မြင့်, arousal သို့မဟုတ် psychomotor သက်ရောက်မှုအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုစေခြင်းငှါအချက်ကိုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့စေခြင်းငှါ18 ပင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုမှအနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုတန်ပြန်စခွေငျးငှါကိုပြောင်းလဲ။
အဆိုပါ subchronic ဃ-စိတ်ကြွဆေးအဖွဲ့ခွဲအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုဖို့တိုးလာ DA တုံ့ပြန်မှုမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူတွဲခဲ့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်စမ်းသပ်သင်တန်းသားများအားဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်မူးယစ်ဆေး-တွဲလှုံ့ဆော်မှု DA အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးလွယ်ကူချောမွေ့ခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်တံ့သောအခြေအနေများ DA လွှတ်ပေးရန်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။56, 57 ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်လေ့လာမှုများသောလူသားမြားတှငျဤတူညီသောသက်ရောက်မှု၏သက်သေအထောက်အထားများဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကိုမူးယစ်ဆေး-တွဲပေပတ်ဝန်းကျင်တွင်စမ်းသပ်ပြီးသောအခါကျနော်တို့မူးယစ်သွေးဆောင် DA အကဲဆတ်ခြင်းသက်သေအထောက်အထားရယူ18 နှင့် DA လွှတ်ပေးရန်အေးစက်။58 အဆိုပါ discrete မူးယစ်ဆေး cue (ရလဒ်များအရအိပ်ယာဆေးတောင့်) ၏မရှိခြင်းအတွက်မူးယစ်ဆေး-တွဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်လည်ထိတွေ့နှိုင်းယှဉ်အတွက်တစ်ဦး conditional DA တုံ့ပြန်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမပေးခဲ့ပါဘူး။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုစိန်ခေါ်မှုရလဒ်များအရအိပ်ယာဆေးတောင့်မပါဘဲမူးယစ်ဆေး-တွဲပတ်ဝန်းကျင်၌ပေးသောခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ကဖြည့်စွက်ခြင်းထက်အခြားအရာတစ်ခုခုထင်ဟပ်နေချိန်တွင်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး, မူးယစ်ဆေး-တွဲလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်လုပ်ခဲ့ပြီးခဲ့ဖြစ်နိုင် အတူတူအခြေအနေများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် DA တုံ့ပြန်မှု၏။59, 60
လေ့လာမှုတစ်ခုအစှမျးသတ်တိ [တစ်ဦးကောင်းမွန်စွာအတည်ပြုနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းခဲ့ပေမယ့်11ကို C] raclopride အဆိုပါ striatum အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုသာအထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ [စိတ်ဖိစီးမှုမှလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ထိခိုက်မခံတဲ့အစကို အသုံးပြု. (ဥပမာ extrastriatal ဒေသများရှိဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိမရှိလေ့လာဖို့အကျိုးစီးပွားပါလိမ့်မယ်18F ကို] fallypride) ။ အမှန်စင်စစ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ကစူးရှသောဓာတ်ခွဲခန်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုအောက်ပါ dorsal medial prefrontal cortex အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်သရုပ်ပြခဲ့သည်။55
နောက်ထပ်အလားအလာရှိသောန့်အသတ်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှု၏ထိန်းချုပ်မှုသဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ pre-လက်တွေ့သုတေသနာင်း precipitate ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်အတွက်ဖိအားနှစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်အတန်းအကြားခွဲခြားထားပါတယ်: 'မထိန်းချုပ်' 'ဖြစ်ရပ်များနှိုင်းယှဉ်' 'control' '။61 မထိန်းချုပ်, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းစိတ်ဖိစီးမှုလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive မှဦးဆောင်သည့် neurobiological အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်ကြောင်းစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။62, 63 ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအဘို့, သင်တန်းသားများကိုအရှင် '' ာင်း 'စိတ်ဖိစီးမှု' 'တုံ့ပြန်မှု' 'သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနိုင်ရာ' 'ထိန်းချုပ်မှု' 'တစ်ဒီဂရီအဘို့အခွင့်အခွအေန၏ရိပ်မိထိန်းအကွပ်မဲ့လျှော့ချခဲ့ကြရသောသူတို့ရှေးခယျြမယ်လို့အချိန်မရွေးစမ်းသပ်မှုရပ်ဆိုင်းရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည် စိတ်ဖိစီးမှုရန်။
သင်တန်းသားများကိုဂရုတစိုက်အတိတ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းအဘို့အပြခံခဲ့ရကာဆီးမူးယစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီကို session တစ်ခု၏အစမှာပြုလေ၏ပေမယ့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အချို့သင်တန်းသားများကိုအတိတ်တွင်ဆေးရွက်ကြီးသို့မဟုတ်ဆေးခြောက်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းနှင့်ပြီးခဲ့သည့်နီကိုတင်းထိတွေ့မှု၏အချိန်ကိုက်အတည်ပြုခဲ့သည်မခံခဲ့ရ အသွေးတော်စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တွေ့ရှိချက်၏အခြေခံတွင်, နီကိုတင်းသို့မဟုတ်ဆေးခြောက်ထိတွေ့မှုအကြိမ်ကြိမ်ကြောင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ာင်းသွေးဆောင်နိုငျသညျ,64 ဒါကြောင့်ယခင်ကသောက်သည်ခဲ့သောသင်တန်းသားများကိုပြီးသားအခြားရှက်ကြောက်၏သီအိုရီဖြစ်နိုင်ခြေဤအရပ်, sensitized စေခြင်းငှါစောဒကတက်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ကြိုတင်နီကိုတင်းသို့မဟုတ်ဆေးခြောက်ထိတွေ့မှုပမာဏကိုကအရမ်းနိမ့်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဃ-စိတ်ကြွဆေးနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုကိုသိသိသာသာသူတို့ရဲ့ကြိုတင်အသုံးပြုမှုအတွက်ကွဲပြားဘူး, နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-စိတ်ကြွဆေး regimen တစ်ခုသက်ရောက်နေဆဲအတိတ်အသုံးပြုမှုအလားအလာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိနေသော်လည်းလေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုပဏာမစမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထားများကိုထောက်ပံ့ပေး Vivo အတွက် psychostimulants မှ DA ာင်းလူသားတွေအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုမှယဘေုယဖြစ်နိုင်သည်။ အသိမြှကဲ့သို့သောဖြစ်စဉ်များမကြာခဏစွဲသို့မဟုတ်စိတ္တအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapses များအတွက်အကောင့်မှအဆိုပြုထားခဲ့ကြကြောင်း DA အဓိကအခန်းကဏ္ဍရှိသည်ဟုယုံကြည်သောရောဂါအတွက်ဖြစ်ပါသည်။2, 65 ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအစမ်းသဘောစတင်အလားအလာတစ်စုံတစ်ဦးကထပ်မံဘဝဖိအားထိတွေ့သောအခါအထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုအဆငျ့ဆငျ့, အထူးသဖြင့် putative DA-related မမှန်အဘို့, စတင်ခြင်းသို့မဟုတ် relapse ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမယ်လို့မည်ကဲ့သို့ချိတ်ဆက်နိုင်စိတ်ကြွဆေး-related သက်ရောက်မှုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ယောက်တည်းထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုကိုလည်း striatum အတွင်းအချို့သော DA လွှတ်ပေးရန်ရူးနှမ်း။ မည်သို့ပင်ဆိုစေမှန်းဆသော်လည်း, ကသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးမပါဘဲဖိအားထပ်ခါတလဲလဲသောသီအိုရီတချို့ထောက်ခံမှုပေးထားပါတယ်, neurobiological ဖြစ်ရပ်များ၏အဆငျ့ဆငျ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ66 ကြောင်းကိုလည်း DA-related မမှန်တစ်အရေအတွက်၏စတင်ခြင်းသို့မဟုတ် relapse သြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်, ထပ်ခါတလဲလဲ '' စိတ်ဖိစီးမှု 'ရန်' 'ာင်း' '၏တိကျသောအခန်းကဏ္ဍ, မျှော်မှန်းမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ခဲ့သည်။
ယခင်လေ့လာမှုများထိခိုက်စေလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive အားနည်းချက်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်စိတ်ရောဂါ phenomenology ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စကားရပ်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေထမြောက်တော်မူပြီ။4, 5, 6, 7, 67 ဥပမာအားဖြင့်, မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် psychotic တုံ့ပြန်မှုကြုံတွေ့ခဲ့သူကိုကင်းသုံးစွဲသူတစ်ဦးလေ့လာမှုအတွက် 65% သောကွောငျ့ဖွစျသညျ (အဆငျ့ဆငျ့သောဤဆိုးကျိုးများပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်လာအစီရင်ခံတင်ပြ, အကြောက်လွန်ရောဂါ ideation ပိုပြီးပြင်းထန်ဖြစ်လာခဲ့သည်သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းဆေးများအားဖြင့်အစပျိုးခဲ့သည်,) အပြုအမူဆိုင်ရာအကဲဆတ်ခြင်းပြခြင်း, Re-ဆေးရုံတင်၏ကြီးမြတ်သောအရေအတွက်အားဖြင့်ရည်ညွှန်းတဲ့အတိုင်းဒီတစ်ဦးချင်းစီ, နောက်ဆက်တွဲမှာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှပြန်သွားကြသည်ကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။5 DA ာင်းသည်ဤနှင့်အခြားပြဿနာများပိုမိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်အခြေခံရှိမရှိကပိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အဆုံးအဖြတ် longitudinal အမူအကျင့်, neuroimaging နှင့် psychopharmacological စိန်ခေါ်မှုလေ့လာမှုများလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပွငျကမတူကွဲပြားသောရောဂါလက္ခဏာ vs တိကျတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေအဘို့တံခါးခုံ၏လျှော့ချတစ် nonspecific ထိခိုက်မခံတဲ့ခြင်းနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ၏ဆက်စပ်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်လိမ့်မည် ဥပမာ, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသည့်စနစ်တုန့်ပြန်စူးရှသောစိုးရိမ်ပူပန်တုံ့ပြန်မှု, psychotic '' ချိုး 'မူးယစ်ဆေးရှာနှင့်အသုံးပြုခြင်း၏ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းအကြိမ်ကြိမ်အပါအဝင် Manic ရောဂါလက္ခဏာတွေ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာတွေ့ရှိချက်စိတ်ရောဂါနမူနာရန်ယေဘူယျနိုင်ပါတယ်သောအဆိုပြုယခုအဘို့, ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သော်လည်း, ဒီအတည်ပြုခဲ့သည်ခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။
Lieberman JA, Sheitman BB, Kinon BJ ။ schizophrenia ၏ pathophysiology အတွက် Neurochemical sensitization: အာရုံခံစည်းမျဉ်းများနှင့်ပလပ်စတစ်အတွက်လိုငွေပြမှုနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Neuropsychopharmacology 1997; 17: 205-229 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Leyton M, Vezina P. Dopamine သည်စွဲလမ်းမှုအားအားနည်းခြင်းအတွက်အာရုံကြောဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုပုံစံ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ 2014; 35: 268-276 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Kalivas PW, Stewart J. Dopamine ဂီယာသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်မော်တာအားလှုပ်ရှားမှု၏အာရုံစူးစိုက်မှု။ Brain Res Brain Res Rev 1991; 16: 223-244 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | CAS |
Angrist BM, Gershon S. စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်သောအမ်ဖီတမင်းစိတ်ဓာတ် - ပဏာမလေ့လာတွေ့ရှိချက်များ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 1970; ၂: ၉၅–၁၀၇ ။ | PubMed | CAS |
Bartlett E, Hallin A, Chapman B, Angrist ခ။ ကိုကင်း၏စိတ်ကိုနှိုးဆွစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုစိစစ်ရွေးချယ်ခြင်း - စွဲလမ်းမှုအားနည်းခြင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအမှတ်အသား? Neuropsychopharmacology 1997; ၁၆: ၇၇-၈၂ ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Pierre PJ, ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲသောအမ်ဖီတမင်း (Vezina P. Predisposition) - အသစ်အဆန်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိတွေ့မှုမှတုန့်ပြန်မှု၏အလှူငွေ။ Psychopharmacology 1997; 129: 277-284 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | CAS |
ထပ်ခါတလဲလဲအချင်းချင်းအပြန်အလှန် cranial အမ်ဖီတမင်းသွေးကြောသွင်းခြင်းများနောက်ဆက်တွဲအိုင်အက်ဖ်အမ်ဖီတမင်း၊ ကိုကင်း၊ ကဖိန်းဓာတ်နှင့်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှု Hooks MS, Jones GH, Liem BJ, Justice JB Jr. အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 1992; 654: 444-447 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
sensitization အတွက် Antelman SM, Eichler AJ, Black က CA, Kocan stress စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် amphetamine ၏လဲလှယ်နိုင်ခြင်း။ သိပ္ပံ 1980; 207: 329-331 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
ပီယပ် RC, Kalivas PW ။ amphetamine ကဲ့သို့ psychostimulants မှအမူအကျင့် sensitization ၏အသုံးအနှုနျး၏တစ် ဦး က circuitry မော်ဒယ်။ Brain Res Brain Res Rev 1997၊ 25: 192-216 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Pani L ကို, Porcella တစ် ဦး, Gessa GL ။ dopaminergic စနစ်၏စိတ်ဖိစီးမှုဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ကို။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု 2000; ၅: ၁၄-၂၁ ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Barr AM, Hofmann စီအီး, Weinberg J, Phillips က AG ။ ထပ်ခါတလဲလဲ, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း-d-amphetamine မှထိတွေ့မှုတစ်ခုနောက်ဆက်တွဲဖိအားမှ HPA ဝင်ရိုး၏အထိခိုက်စေတယ်။ Neuropsychopharmacology 2002; 26: 286-294 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Nikulina EM, Covington HE 3rd, Ganschow L, Hammer RP Jr, Miczek KA ထပ်ခါတလဲလဲအကျဉ်းလူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုအားဖြင့်သွေးဆောင် amphetamine မှရေရှည်အပြုအမူနှင့်အာရုံခံ Cross- sensitization: အ ventral tegmental areaရိယာနှင့် amygdala အတွက် Fos ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ 2004; 123: 857-865 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | CAS |
Leyton M, Stewart J. Preexposure သည်ခြေလက် - ထိတွေ့မှုအတွက်နောက်ဆက်တွဲစနစ်မော်ဖင်းအကိုက်ကိုတုံ့ပြန်သည့်စက်ခေါင်းတုန့်ပြန်မှုနှင့်အာရုံအတွင်းနူကလိယမှ amphetamine accumbens Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav 1990; 37: 303-310 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Matuszewich L, Carter S၊ Anderson EM, Friedman RD, McFadden LM ခန့်မှန်းရခက်သောစိတ်ဖိစီးမှုအောက်ပါစိတ်ကြွဆေးကိုစူးရှသောဆေးထိုးရန်စွဲမြဲသောအမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောဓာတုဗေဒအာရုံခံမှု။ Behav Brain Res 2014; 272: 308-313 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Prasad BM, Sorg BA, Ulibarri C, Kalivas PW ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် psychostimulants မှ sensitization ။ အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးနှိုင်းယှဉ် dopamine ဂီယာ၏ပါဝင်မှု။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 1995; 771: 617-625 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Piazza PV, Le Moal ML ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုမှထိခိုက်လွယ်၏ Pathophysiological အခြေခံ: စိတ်ဖိစီးမှု, glucocorticoids နှင့် dopaminergic အာရုံခံအကြားတစ် ဦး အပြန်အလှန်၏အခန်းကဏ္။ ။ Annu ဗြာ Pharmacol Toxicol 1996; 36: 359-378 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Reid က MS, Ho LB, Tolliver BK, Wolkowitz OM, Berger SP ။ metyrapone ကုသမှုအောက်ပါစိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင်အပြုအမူ sensitization ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြောင်းပြန်။ Brain Res 1998; 783: 133-142 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Boileau ငါ Dagher တစ်ဦးက, Leyton M က, ဂွန် RN, Baker GB ကို, Diksic M က et al။ လူသားများတွင်လှုံ့ဆော်ဖို့အသိမော်ဒယ်: ကျန်းမာယောက်ျားအတွက် [11C] raclopride / positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု 2006; 63: 1386-1395 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
ပထမဦးဆုံးအကို MB, Spitzer RL, မျောက်လွှဲကျော်က M, Williams က JBW ။ ။ DSM-IV-TR ဝင်ရိုးတန်းငါ Disorders များအတွက်စနစ်တကျလက်တွေ့အင်တာဗျူး, သုတေသနဗားရှင်း, non-လူနာ Edition ကို။ SCID-I / NP: နယူးယောက်, NY, အမေရိကန်, 2002 ။
Pruessner JC၊ Hellhammer DH, Kirschbaum C. Burnout၊ စိတ်ဖိစီးမှုခံစားမှုနှင့် cortisol တုန့်ပြန်မှုသည်နိုးထမှုကိုတုံ့ပြန်သည်။ Psychosom Med 1999; 61: 197-204 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Rosenberg ကအမ်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်။ Wesleyan တက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း: Middleton, CT, USA, 1989 ။
Spielberg CD ကို, Gorsuch RL, Lushene RE ။ နိုင်ငံတော်-စရိုက်များတော့ပူပန် Inventory များအတွက်လက်စွဲစာအုပ်။ စိတျပညာစာနယ်ဇင်းတိုင်ပင်: Palo Alto, CA, USA, 1970 ။
Kirschbaum ကို C, Prussner JC, ကျောက်ခေတ် AA ကို, Federenko ငါ Gaab J ကို, Lintz: D et al။ ကျန်းမာသောလူများ၏လူ ဦး ရေအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုမှမြဲမြင့် cortisol တုံ့ပြန်မှု။ Psychosom Med 1995; 57: 468-474 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Schommer NC, Hellhammer DH, Kirschbaum C. hypothalamus-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၏ဓာတ်ပြုမှုနှင့်အကြိမ်ကြိမ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုစိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်စာနာ - adrenal-medullary system အကြားကွဲ။ Psychosom Med 2003; 65: 450-460 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Pruessner JC၊ Hellhammer DH, Kirschbaum C. နိမ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ ပျက်ကွက်မှုနှင့် adrenocortical စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု။ Pers Indiv Differ 1999; 27: 477-489 ။ | ဆောင်းပါး |
Pruessner JC, Champagne F, Meaney MJ, Dagher A. Dopamine သည်လူတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အစောပိုင်းဘဝမိခင်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုကိုတုန့်ပြန်မှုအနေဖြင့်ထုတ်လွှင့်သည်။ J ကို Neurosci 11; 2004: 24-2825 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Soliman A၊ O'Driscoll GA, Pruessner J, Holahan AL, Boileau I, Gagnon D et al။ စိတ်ပညာ၏အန္တရာယ်မှာလူသားတွေအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်: တစ် [11C] raclopride ပေလေ့လာမှု။ Neuropsychopharmacology 2008; 33: 2033-2041 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Lorr M, McNair DM, Fisher SU ။ စိတ်ကြွစိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်များများအတွက်အထောက်အထား။ J Pers Assess 1982; 46: 432-436 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Simulator ကိုအခြေခံပြီး validation ကို: neuroreceptor မြေပုံအတွက် Multi- frame ကို PET အချက်အလက်များ၏ကုန်ကျစရိတ် N ကို, Dagher တစ် ဦး က, Larcher K ကို, အီဗန် AC အ, Collins က DL, Reilhac အေ Motion ဆုံးမခြင်း။ Neuroimage 2009; 47: 1496-1505 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Collins DL၊ Neelin P၊ Peters TM၊ အီဗန်အက်စ်။ standardized Talairach အာကာသအတွင်း MR volumetric အချက်အလက်များ၏အလိုအလျောက် 3D intersubject မှတ်ပုံတင်။ J ကို Comput Tomogr 1994 Assist; 18: 192-205 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Lammertsma AA, Hume SP PET receptor လေ့လာမှုများအတွက်ရိုးရှင်းသောရည်ညွှန်းသည့်တစ်ရှူးပုံစံ။ Neuroimage 1996; 4: 153-158 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Gunn RN, Lammertsma AA, Hume SP, Cunningham VJ ။ တစ် ဦး ရိုးရှင်းသောရည်ညွှန်းဒေသမော်ဒယ်သုံးပြီး PET အတွက် binding ligand-receptor ၏ parametric ပုံရိပ်။ Neuroimage 1997; 6: 279-287 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Worsley KJ, Marrett S, Neelin P, Vandal AC, Friston KJ, Evans AC ။ ဦး နှောက် activation ၏ပုံရိပ်တွေအတွက်သိသာထင်ရှားသောအချက်ပြဆုံးဖြတ်ခြင်းများအတွက်တစ် ဦး ကစုစည်းစာရင်းအင်းချဉ်းကပ်မှု။ Hum Brain Mapp ၁၉၉၆; ၄: ၅၈-၇၃ ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Collins က L ကို, အီဗန်, AC, ကေတီဟုမ်းကို C, ပီတာ TM အလိုအလျောက်။ MRI ထံမှ neuro-ခန္ဓာဗေဒဖွဲ့စည်းပုံ၏အလိုအလျောက် 3D segment ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်အတွက်ပြန်ကြားရေးအပြောင်းအလဲနဲ့။ vol ။3။ Kluwer: Dordrecht, 1995 ။
အီဗန် AC အ, Marrett S က, Neelin P ကို, Collins က L ကို, Worsley K ကိုဒိုင် W က et al။ stereotactic ကိုသြဒိနိတ်အာကာသအတွင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ activation ၏ခန္ဓာဗေဒမြေပုံ။ Neuroimage 1992; ၁: ၄၃–၅၃ ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | CAS |
Pruessner JC, Kirschbaum ကို C, Meinlschmid, G, Hellhammer DH ။ မျဉ်းကွေးအောက်ရှိofရိယာတွက်ချက်မှုအတွက်ဖော်မြူလာနှစ်မျိုးသည်စုစုပေါင်းဟော်မုန်းပမာဏနှင့်အချိန်ပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲခြင်းကိုတိုင်းတာသည်။ Psychoneuroendocrinology 2003; 28: 916-931 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Cruz FC, Marin MT, Leao RM, Planeta CS ။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်ဖိစီးမှုများကိုစိတ်ဖိစီးမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည့် dopaminergic စနစ်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ J ကို Neural Transm 2012; 119: 415-424 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Abercrombie ED, Keefe Ka, DiFrischia DS, Zigmond MJ ။ အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု differential အကျိုးသက်ရောက်မှု Vivo အတွက် striatum, နျူကလိယ accumbens နှင့် medial တိုကျရိုကျ cortex အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်။ J ကို Neurochem 1989; 52: 1655-1658 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Finlay JM, Zigmond MJ ။ ဗဟို dopaminergic အာရုံခံအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏သက်ရောက်မှု: ဖြစ်နိုင်သောလက်တွေ့သက်ရောက်မှု။ Neurochem Res 1997; 22: 1387-1394 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | CAS |
Rouge-Pont F၊ Piazza PV၊ Kharouby M၊ Le Moal M၊ Simon H. Higher နှင့်ပိုတက်စီယမ်များကြောင့် dopamine ပါဝင်မှုများသည့်နျူကလိယတွင်အမ်ဖီတမင်းကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတွင်ပါရှိသည်။ တစ် ဦး က microdialysis လေ့လာမှု။ Brain Res 1993; 602: 169-174 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | CAS |
Mizrahi R ကို, Kenk M က, Suridjan ငါ Boileau ငါဂျော့ခ်ျ TP, McKenzie K သည် et al။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုနှင့်အတူမရှိဘဲ schizophrenia များအတွက်လက်တွေ့မြင့်မားတဲ့အန္တရာယ်မှာဘာသာရပ်များအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင် dopamine တုံ့ပြန်မှု။ Neuropsychopharmacology 2014; 39: 1479-1489 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Mizrahi R ကို, Addington J ကို, Rusjan pm တွင်, Suridjan ငါ Ng သည်တစ်ဦးက, Boileau ငါ et al။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 2012; 71: 561-567 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Tidey JW, Miczek Ka ။ တစ်ခု: လူမှုရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုရွေးချယ် mesocorticolimbic dopamine လွှတ်ပေးရန်ပွောငျးလဲ Vivo အတွက် microdialysis လေ့လာမှု။ Brain Res 1996; 721: 140-149 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
McLaughlin KA, Kubzansky LD, Dunn EC, Waldinger R, Vaillant G, Koenen KC ။ ကလေးဘဝလူမှုပတ် ၀ န်းကျင်၊ စိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုနှင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးစိတ်ဓါတ်နှင့်စိုးရိမ်မှုမမှန်မှုများ။ စိတ်ကျရောဂါ 2010; 27: 1087-1094 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Booij L၊ Tremblay RE, Szyf M, Benkelfat C. Serotonin စနစ်အပေါ်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်အစောပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုများ - ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အကျိုးဆက်များနှင့်စိတ်ပညာအတွက်အန္တရာယ်။ J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု Neurosci 2015; ၄၀: ၅-၁၈ ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Oswald LM, Wand GS, Kuwabara H, Wong DF, Zhu S, Brasic JR ။ ကလေးဘဝအခက်အခဲများ၏သမိုင်းကြောင်းသည်အမ်ဖီတမင်းနှင့် ventral striatal dopamine တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ Psychopharmacology 2014; 231: 2417-2433 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Martinez: D, Gil R ကို, Slifstein M က, Hwang DR, Huang က Y ကို, ဖာရတစ်ဦးက et al။ အရက်သေစာမှီခိုမှုသည် ventral striatum တွင်တုံးတောက်နေသော dopamine ကူးစက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 2005; 58: 779-786 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Volkow ND, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Logan J ကို, Gatley SJ, Hitzemann R ကို et al။ detoxified ကိုကင်း - မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက် striatal dopaminergic တုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းသွားသည်။ သဘာဝ 1997; 386: 830-833 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Volkow ND, ဝမ် GJ, Telang က F, မုဆိုး JS, Logan J ကို, ဂြနျေး M က et al။ detoxified အရက်သမားများတွင် striatum အတွက် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုအကြီးအကျယ်ကျဆင်းခြင်း: ဖြစ်နိုင်သော orbitofrontal ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို Neurosci 2007; 27: 12700-12706 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Gipson CD, Kalivas PW ပိုကိုကင်း - ပိုအချိုမှု - ပို။ စွဲ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 2014; 76: 765-766 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Koob GF၊ Le Moal အမ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု - hedonic homeostatic dysregulation ။ သိပ္ပံ 1997; 278: 52-58 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Leyton M. ဘာကြောင့်ဆုချို့တဲ့တာလဲ။ J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု Neurosci 2014; 39: 291-293 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Hernaus: D, Collip: D, Lataster J ကို, Ceccarini J ကို, Kenis, G, Booij L ကို et al။ COMT Val158Met genotype သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုစိတ်ဖိစီးမှုစိန်ခေါ်မှုကိုတုန့်ပြန်မှုအရ prefrontal [18F] fallypride ရွှေ့ပြောင်းခံရမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုခံစားချက်များကိုပြောင်းလဲသည်။ PLoS One 2013; 8: e65662 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Choi EY, Yeo BT, Buckner RL ။ ပင်ကိုစရိုက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုများကခန့်မှန်းလူ့ striatum ၏အဖွဲ့အစည်း။ J ကို Neurophysiol 2012; 108: 2242-2263 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Nagano-Saito တစ်ဦးက, Dagher တစ်ဦးက, Booij L ကို, ကျောက်စရစ် P ကို, Welfeld K ကိုကာဇီ KF et al။ ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများတွင်လူ့ medial prefrontal cortex -18F-fallypride / PET လေ့လာမှုတွင်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော dopamine ထုတ်လွှတ်မှု။ Synapse 2013; 67: 821-830 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Duvauchelle CL, Ikegami A, Asami S, Robens J, Kressin K, Castaneda E. ကိုကင်းဓာတ်အခြေအနေတွင် NAcc dopamine နှင့်အပြုအမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲသွေးကြောသွင်းအုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက်။ Brain Res 2000; 862: 49-58 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Weiss F, Maldonado-Vlaar CS, Parsons LH, Kerr TM, Smith DL, Ben-Shahar O. ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သောလှုံ့ဆော်မှုများဖြင့်ကိုကင်းရှာဖွေသည့်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ခြင်း - amygdala ရှိငရုတ်သီးအော်ပရေတာ - တုန့်ပြန်မှုနှင့် extracellular dopamine အဆင့်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ နှင့်နျူကလိယ accumbens ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 2000; 97: 4321-4326 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | CAS |
Boileau ငါ Dagher တစ်ဦးက, Leyton M က, Welfeld K ကို Booij L ကို, Diksic M က et al။ လူသားများတွင် Conditioned dopamine release: poshetron emission tomography [11C] amphetamine နှင့်အတူ raclopride လေ့လာမှု။ J ကို Neurosci 2007; 27: 3998-4003 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Vezina P, Leyton M. အခြေအနေနှင့်အချက်အလက်များနှင့်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားများတွင်လှုံ့ဆော်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ Neuropharmacology 2009; 56 (ပျော့ပျောင်း 1): 160-168 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
ရော်ဘင်ဆင်တီ၊ Browman KE၊ Crombag HS၊ Badiani အေမော်ဂျူလ်သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကိုမူးယစ်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုပတ် ၀ န်းကျင်အခြေအနေများအားဖော်ပြခြင်း။ Neurosci Biobehav Rev 1998; 22: 347-354 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Cabib S, Puglisi-Allegra အက်စ်စိတ်ဖိစီးမှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့် mesolimbic dopamine စနစ်။ Psychopharmacology 1996; 128: 331-342 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
MacLennan AJ, Maier SF ။ ကြွက်များတွင်လှုံ့ဆော် stereotypy ၏ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင်စွမ်းရည်။ သိပ္ပံ 1983; 219: 1091-1093 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Anisman H, Hahn B, Hoffman: D, Zacharko RM ။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုများစေသည့်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav 1985; 23: 173-183 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Vezina P, McGehee DS, Green WN ။ နီကိုတင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းနီကိုတင်း - သွေးဆောင်အပြုအမူများ၏ sensitization ။ Prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 2007; 31: 1625-1638 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | CAS |
Howes OD, Murray RM ။ Schizophrenia: ပေါင်းစည်း sociodevelopmental- သိမြင်မှုပုံစံ။ Lancet 2014; 383: 1677-1687 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Seo D, Tsou KA, Ansell EB, Potenza MN, Sinha R. တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသောဆင်းရဲဒုက္ခများသည်စူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်အာရုံကြောဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုသိမြင်စေသည်။ ကျန်းမာရေးလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Neuropsychopharmacology 2014; 39: 670-680 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
RM တင်ပါ မှုများထပ်တလဲလဲအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ရောဂါ၏ neurobiology သို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု၏ Transduction ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1992; 149: 999-1010 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |